Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Gọọmentị German ọhụrụ ga-akwado wii wii n'ụzọ iwu kwadoro
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Entertainment • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Germany ga-ewepụta usoro nke 'na-achịkwa nkesa cannabis nye ndị okenye'
Gọọmentị German ọhụrụ ga-akwado ịṅụ wii wii n'iwu
Nkwekọrịta gọọmentị na-emekọrịta ihe n'etiti Social Democrats nke obodo, Free Democrats na Greens gụnyere ndokwa maka imebi wii wii.
Dị ka ọhụrụ akụkọ, ọhụrụ mmekota ọchịchị nke Germany ga-ewepụta usoro nke 'na-achịkwa nkesa cannabis nye ndị okenye' maka 'eri ihe ntụrụndụ' site na ụlọ ahịa nwere ikike.
Dị ka ederede nke akwụkwọ nwetara site German ozi ọma, mmekorita ọchịchị nkwekọrịta n'etiti obodo Social Democrats, Free Democrats na Greens gụnyere ndokwa maka decriminalizing wii wii oriri.
"Mmekọrịta ahụ chọrọ ịmanye njikwa siri ike nke ngwaahịa ahụ iji hụ na ọ dị mma na 'ichebe ụmụaka'," nkwekọrịta ahụ na-ekwu.
Ndokwa iji kwado ihe ntụrụndụ n'ụzọ iwu kwadoro afọ e leaked izu gara aga ka German mgbasa ozi site na isi mmalite na otu atọ ahụ. wii wii ọgwụ abụla iwu na European Union kemgbe 2017.
Emere agba ikpeazụ nke mkparịta ụka njikọta ụzọ atọ na Berlin. Social Democrat Olaf Scholz ga-ewere oche onye isi ala, dochie onye isi ala German bụ Angela Merkel, onye na-achọghị ntuli aka ọzọ.
Ndị otu Merkel Christian Democratic Union (CDU) na ndị mmekọ sitere na Christian Social Union na Bavaria (CSU) gosipụtara arụmọrụ adịghị mma na ntuli aka izugbe nke Septemba, ebe ndị otu Scholz nwetara nnukwu uru. Social Democratic Party (SPD) nke etiti aka ekpe họọrọ ime onwe ya na ndị Greens nku ekpe na Free Democrats (FDP) kama ịchọọ ọhụrụ, nke a na-akpọ 'Grand Coalition' na ndị Christian Democrats.